Dhalinyarro reer Afgaanistaan ah oo si qasab ah loogu celiyey dalkoodii | Somaliska
Xalay markeey saacadu aheyd 21.50 (Tobbankii fiidnimo oo toban dhiman) ayey cagaha dhulka ka qaaday diyaaradii ay saarneeyeen dhalinyarro tobboneeyo gaaraya oo si qasab ah dalkoodii dib loogu celiyey. Dhalinyaradan ayaa waxeey ku xirnaayeen xerro ku taala Göteborg. Waxaana dhalintii la celiyey ku jiray wiil la sheegay inuu qabay cudur halis ah.
“Maanta waanu ooyeynenaa beritana waxaan halkeenii ka sii wadeeynaa halgankii aan uga hortageeynay in aan dhalaanka keli socodka ah dib loogu celin dalalkoodi” ayey Kinna Skoglund oo af hayeen u ah shabakadda Vi står inte Ut (Dib joog ma nihin) oo ku sugneyd garoonka diyaaradaha Landvetter ee magaaladda Göteborg.
Xarrunta laanta socdaalka iyo qeybteeda lugu hayo dadka la musaafurinayo ee magaaladda Göteborg, ayaa ka gaabsanaya ineey ka jawaabaan su,aalaha la xirriira celinta dhalaankaasi iyo guud howlaha la xirriiraba. Amuurtan ayey sheegeen in su’aalahaas booliska la la xirriiri karo marba hadeey yihiin cidda fulineeysa amarka daabulinta dhalinta reer Afgaanistaan.
“Waxaa lugu dhex sii daaya Kaabul, iyado la leeyahay halkaas waxaa jooga dad gacan qabanaya oo geeynaya hoteel ay muddo labbo toddobaad joogayaan haddii ay doonayaan, ka dibna ay iska dhicin doonaan nolosha adag ee Kabul” ayey tiri Kinna oo ka hadleeysa sida u ekaan karo xaalkooda marka dib loogu celiyo dalkooda. Waxeey sidoo kale sheegtay in badan oo iyaga ka mid ah dadkaasi ay yihiin kuwo taagan meeel cidlo ah oo qaarkood markoodii horeba sharci la’aan ku joogay Iiraan, haatana ay qarka u saaran yihiin ineey markale ka soo baxsadaan.
Skoglund, waxaa kaloo ay sheegtay in nolol adag ay sugeeyso kuwaasoo xitaa qaarkood ay daruufuhu badayaan in jirkooda ay iibsadaan ama ay ku biiraan kooxda Taalibaan. Dhalintan xalay laga musaafuriyey si qasab ah dalka Iswiidhan, ayaa laanta socdaalka sharci ay dhaqan gelisay wuxuu ka dhigay in da’doo la kordhiyo lagana dhigo qaan gaar (18 jiro) taasina ay keentay in si qasab ah dalkoodii loogu celiyo. Celintan ayaa waxaa ay qeyb ka tahay heshiis ay Iswiidhan iyo Afgaanistaan kala saxiixdeen oo dhigaya in dib loogu soo celiyo dalkooda dadyowga sharciga degnaansho Iswiidhan u diidatay.
Arrimahan waxaa ay abuureen walaac badan oo dhalinta reer Afgaanistaan dareemayaan. Saddex ka mid ah dhalinyaro hore loogu diiday sharciayda ayaa nafta iska qaaday sida ay shabakaddu sheegtay bilihii hore ee sanadkaan. Halka qaar kalena ay qarka u saaran yihiin. Bishii diseembar ee sanadkii hore ayey diyaaradii ugu dambeeysay ay ka qaaday garoonka dhalinayarro reer Afgaan ah oo qasab loo celiyey. Duulimaadkii xalayna wuxuu ahaa kii labaad ee qaado dhalinyarro si qasab ah loo celiyey. Bila soo socda ayaa sidoo kale la rajeeynayaa in diyaarad kale ay qaado dhalinyarro iyagana sugaya in la celiyo.